Danbiile Birhanu Nega Oo Ka Rajo Quustay Riyadoodii Ginbood-7 Ee Soo Celinta Nidaamkii Dhargiga Iyo Xaaladiisa Caafimaad Oo Kasii Dartay. - Cakaara News
Danbiile Birhanu Nega Oo Ka Rajo Quustay Riyadoodii Ginbood-7 Ee Soo Celinta Nidaamkii Dhargiga Iyo Xaaladiisa Caafimaad Oo Kasii Dartay.
Jigjiga(CN) Sabti.Maarso.21.2015, Danbiilaha fikirka cidhiidhyoon ee Birhanu Nega waxaa uu kamid yahay shaqsiyaadkii aas aasay kooxdan qashinkii Dhargiga ee Ginbood-7 oo haatan ku dhuunta dalka dibadiisa. Birhanu waxaa ay dhalasho ahaan ilmo adeer yihiin diktaatorkii Mangistu Xaylemaryam.
Hadii dib loo eego kan fikirkiisa cidhiidhyoon waxaa uu fashilmay oo ay shacabka reer Itoobiya kasoo hor jeedsadeen markii ay doorashadii 2005-ta Birhanu kasoo if-baxeen fikirkii cidhiidh-yoonaa ee Dergiga taasoo uu kuwaayay shacabkuna yaqiin sadeen. Sababtoo ah waxaa uu kusoo tartamayay in uu Itoobiya ku maamulo hal-diin, hal luuqad iyo hal-qoomiyad. Wuxuuna tusaale u soo qaatay in ay 9-ka dawlad deegaan khalad yihiin isagoo aaminsanaa in madaxwaynayaasha deegaanada Addis Ababa laga soo magacaabo.
Waliba waxaa uu dadka deegaanka Soomaalida Itoobiya ka aaminsanaa dad iyagu xoolo dhaqato uun ah oo aan ismaamul awoodin isagoo aamnsanaa in ay sii maamulaan dadkii xilgii Dhargiga godey lageeyay. Birhanu waxaa uu aad ugasoo horjeedsaday nidaamka sinaanta iyo dimuqraadiyada ee u curtay qoomiyadaha Itoobiya.
Hadaba Birhanu oo qaab baxsad ah kujooga dibada ayaa hada kusugan xaalad rajo beel ah isagoo xaaladiisa caafimaad aad u xuntahay lehna cudurka cancerka islamarkaana ay lug iyo gacani qalashay, hadana uu kujiro hosbitaal.
Birhaanu oo ay rajadiisu gudhay ayay uga sii dartay socdaalkii waftiga madaxwaynaha DDSI mudane Cabdi Maxamuud Cumar iyo shaqooyinka isbadal ee dalka iyo deegaanku gaadhay gaar ahaan dibada oo ah meelihii ay ku dhuumanayeen isaga iyo kooxda aaminsan nidaamkii Dhargiga ee waa hore laduugay.
Danbiile Birhaanu ayaa aad looga necebyahay dhaqan ahaan dadka reer Itoobiya isagoo caan ku ah taageerista dhaqamada xun xun oo uu waagii doorashada soo dhiganayay inuu dalka ka ansixinayo dhaqanka Khaniisnimada, waxaana wakhti xaadirkan jira Hotel lagu maga caabo Dama uu walaalkiis kuleeyahay dibada oo laga isticmaalo dhaqamada xun.
Iskusoo wada duuboo Danbiile Birhaanu oo ahaa rugta ay kasoo askunto dhamaan fikiradii cidhiidhyanaa ee Dhargiga ayaa hada kahor rajadiisu aad u xumayd dhan walba iyadoo wakhtigana ay tani uga sii dartay guulaha waftiga DDSI ee madaxwayne Cabdi Maxamuud oo dhin bil dab ah ay kunoqotay looxdiisii nolasha kadhacsanayd ee Ginbood-7.